🥇 ▷ LG V40 ayaa la soo bandhigay inta u dhaxaysa Note 9 iyo iPhones cusub: miyaanay ahayn oo kaliya 5 kamarado inay kugu yaabin doonaan? ✅
Maanta waxaan ku soo laabanay si aan ugala hadalno LG qeybta ugu sareysa qiyaasta, waxay noqon laheyd afraad sanadka, kaas oo shirkadda South Korea ay rabto inay ku wiiqaan kuwa ay xafiiltamaan eerubucii ugu dambeeyay of 2018. Qaar ka mid ah macluumaadka cusub ee ku soo daatay shabaqa ayaa soo jeedinaya xiiso leh faahfaahinta taariikhda soo gudbinta aaladda iyo astaamaha farsamada.
Marka loo eego wararka ugu dambeeyay, LG V40 ayaa noqon kara lagu soo bandhigay bartamihii Sebtember iyo markii ugu horeysay ee iibka bilowga Oktoobar: sidan ayey u shaqeysaa shirkada Kuuriyada Koonfureed sameysigeeda sidoo kale xagga aragtida, iyadoo lagu hayo “fogaan” laga soo bilaabo jadwalka xiga ee wadaadka Samsung, kaas oo la soo bandhigi doono dhamaadka bisha Agoosto, iyo laga bilaabo iPhones-ka cusub, gaar ahaan iPhone 9 2018 (qiyaasta ugu jaban) kaas oo loo bilaabi doono dhanka. dhamaadka Oktoobar.
AKHRISO: LG G7 ThinQ, dib u eegista
Marka la eego qeexitaanka farsamada, waxaan soo gudbineynaa faahfaahino cusub oo xiiso leh: jiritaanka ben waa la xaqiijin doonaa shan kamaradood, camera saddex-gadaal ah Waxay noqon kartaa kan ugu horreeya adduunka ee muraayadaha indhaha ku martiqaada xagal ballaadhan iyo labaad “super telephoto“, In kasta oo labada weji ay noqon doonaan kuwo loo hibeeyay garashada wajiga 3 cabir. Si aan uga sii yaabno waxaan helnay a dheer xiriirka shaashadda-jirka, oo leh bandhiga OLED degganaan in kabadan 90% dusha hore.
Macluumaadka ayaa soo baxay ilaa hadda ha ka fikirin awoodda batteriga iyo jaantusyada shaashadda, oo wax badan ku soo kordhin lahaa dhismaha fikradda koowaad ee aaladda. Waxaan kusoo laaban doonnaa si aan idiinkala socodsiino dhinacyadaan isla markaaba ay soo baxaan warar dheeraad ah
Sidoo kale HTC ma sameyn doontaa taleefanka gacanta casriga ah? Faa’iidooyinku ma hooseeyaan